Tonizia: Mpianatra mpikatroka mitokona tsy hihinan-kanina mba ho tafaverina hianatra ao amin’ny oniversite indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2018 11:41 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Italiano, Français, srpski, English
(Tsara ny manamarika fa efa tamin'ny volana Marsa taona 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Narindra tao amin'ny vondrona Facebook iray ny hetsika ho toy ny endrika saimbôlika fanohanana ny mpianatra, izay mpikambana ao amin'ny Sendikan'ny Mpianatra Toniziana (UGET), ary naaton'ny oniversite noho ny fikatrohan'izy ireo tao amin'ny tobim-pianarana.
Araka ny filazan'ny vondrona Facebook:
Andro fitokonana tsy hihinan-kanina ho firaisankina amin'ireo mpianatra Toniziana nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka ny 10 Febroary 2009.
Niaritra famoretana hatrany nataon'ny manampahefana Toniziana ny Sendikan'ny mpianatra Toniziana (UGET), nandritra ny taona maromaro,… Matetika iharan'ny herisetra, daroka, fampihorohoroana sy fampijaliana ireo tanora sendikalista UGET, no sady tsy misy fanajana ny lalàna rehefa tazonin'ny polisy. Nampiasa herisetra isan-karazany ny polisy mba hanery ireo mpitarika sendikaly hametra-pialana, hamadika ny naman'izy ireo sy hiala amin'ny fikatrohana. Ambenan'ireo polisy mitam-piadiana ny fidirana sy ny lalantsara ao amin'ny oniversite nandritra ny taona maro (na raha ny marina kokoa hatramin'ny nanendren'i Bourguiba ny praiminisitra Ben Ali). Manenjika ireo mpianatra Toniziana nandritra ny 23 taona mahery ireo polisy, izay fantatra fa vahiny avokoa, mba hanakanana azy ireo tsy hametraka afisy, tsy hanao fivoriana sy famoriam-bahoaka hanamafisana ny fitakian'izy ireo.
Tsy misy fanamarinana anefa ny herisetra toy izany. Manao fihetsiketsehana tsy misy herisetra ireo mpianatra UGET, mba hitakiana fanatsarana ny fari-piainan'izy ireo sy ny fepetran'ny fanabeazana, na ny fanokafana faravodilanitra vaovao aorian'ny fianarana oniversite hidirana hiasa na hampiditra olona vaovao… Miray hina hatrany amin'ireo hery demaokratika ihany koa ny UGET, amin'ny fiarovana ny fahafahana ara-politika. Milaza ho manohana hatrany ny tolona ara-tsosialy toniziana ara-drariny ry zareo. Tsy mitandro hasasarana ry zareo raha vao resaka firaisankina amin'ny vahoaka Arabo, indrindra amin'ny vahoaka Palestiniana. Ireo no fahadisoan'ny UGET eo imason'ny fahefana feno tondro-molotra sy tsy manaja ny fahafahana ara-tsendikaly.
Ny 11 febroary 2009, mpitarika sendikaly efatra ao amin'ny UGET no nanomboka fitokonana tsy hihinan-kanina tsy manampahataperana, tao amin'ny toerana tokana sady bitika ao amin'ny 19 Lalana Naplouse ao Tunis. Mitaky ny zony hanohy ny fianarany eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo ary haverina hiverina any amin'ny sekoliny rehefa nesorina tsy ara-drariny, taorian'ny filankevi-pitsipi-pitondratena noho ny fidiran-dry zareo lalina amin'ny hetsika ara-tsendikaly.
Ali Bouzouzeya, Taoufik Louati, Aymen Jaabiri, Mohamed Boualleg, ary Mohamed Soudani ireo mpianatra dimy ary nitokona tsy hihinan-kanina izy ireo mba hitaky hiverina hianatra any am-pianarana.
Mandritra izany fotoana izany, dia ataon'ny polisy izay hanakanana ny olona te-hanohana ireo mpianatra ireo tsy hiditra ao amin'ny toerana misy ny UGET ahitana ny mpianatra mitokona tsy hihinan-kanina, araka ny hita amin'ny lahatsary etsy ambony.
Ankehitriny, tao anatin'ny 43 andro nitokonana tsy hihinan-kanina izay, miharatsy ny fahasalaman-dry zareo ary ahiana ny ainy. Efa imbetsaka ry zareo no nentina nirohotra teny amin'ny hopitaly ary nandidy azy ireo ny dokotera hampitsahatra ny fitokonana tsy hihinan-kanina. Saingy mbola mikiry amin'ny fanohizana izany ry zareo mandra-pahazoan-dry zareo alalana hiverina eny amin'ny oniversite. Na eo aza izany dia tsy mihevitra ny hiova hevitra mihitsy ny manampahefana toniziana.
Inona no hitranga manaraka? Hiandry ny fahafatesan-dry zareo ve ny governemanta vao hiditra an-tsehatra? Ny fotoana ihany no ahafahana mamaly izany fanontaniana izany.